Fivoaran'ny aretina coronavirus :: Sivy ambin’ny folo ihany ny isan’ireo mitondra ny “Covid-19” • AoRaha
Fivoaran’ny aretina coronavirus Sivy ambin’ny folo ihany ny isan’ireo mitondra ny “Covid-19”
Tsy nisy ny olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina “Covid-19”, hatramin’ny omaly tamin’ny 12 ora antoandro. Nijanona ho sivy ambin’ny folo ny isan’ireo nahitana an’io tsimok’aretina mitondra ny Coronavirus io eto Madagasikara, araka ny fampahafantarana nataon’n y Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle, avy teny amin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny “ Covid-19 ” (CCO), omaly tamin’ny 1 ora antoandro.
“Tsy misy soritr’aretina ny valo ambin’ny folo amin’ izy ireo sady salama tsara avokoa. Ny iray no mbola misy hafanana. Enimpolo ny fitiliana vita, omaly hatramin’ny 12 ora (Ndrl: afak’omaly). enina amby zato no voatily, ny tolakandro. Ho an’ny androany maraina hatramin’ ny 12 ora antoandro (Ndrl: omaly) dia 44 no nanaovana fitiliana”, hoy ny profesora.
Samy tsy nisy ny tsimok’ aretina “Covid-19”, araka izany, ireo olona dimampolo amby zato notiliana tao anatin’ny 24 ora. Ireo rehetra nandeha fiaramanidina avy any amin’ny firenena nahitana ny aretina “Coronavirus”, tonga nanomboka tamin’ny 16 marsa hatramin’ny 18 marsa lasa teo, niaraka tamin’ireo nifampikasoka tamin’izy ireo (olona sivy) no nanaovana ny fitiliana. Isan’izany ihany koa ireo mpiasan’ny seranam-piaramanidina eny Ivato (olona roa amby roapolo) nifanerasera nivantana tamin’ny mpandeha sy ny ekipa rehetra, ankoatra an’ireo olona nahiboka amin’ireo toerana tsirairay arahi-maso isan’andro.
“Irariana ny hijanonan’io antontan’isa io mba tsy hisy olona voany intsony ary tsy hisy ny hamoy ny ainy. Tsy mora ny hitazonana an’izany raha toa ka tsy manaraka ny toromarika amin’ny fihibohana any antrano sy ny fitsipika efa napetraka isika rehetra”, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Kianja baolina kitra Miandry ny CAF ny fankatoavana an’i Barikadimy
Rano sy herinaratra :: Afaka mampihemotra ny fanefana faktiora ny Jirama
Fitsaboana tenany :: Ifanotofana ny kilaoraokina